Top 10 Mame Emulators - Play Mame Multiple Arcade Machine Games on your computer iyo Mobile
Hordhac Si Mame
Mame (Multiple Arcade Machine Emulator) waa codsi ah in emulator ayaa loogu talagalay in lagu cilinta hardware nidaamka ciyaarta Arcade ee software si aad iyaga ordi karaan in aad kombiyuutarka shakhsi. Ujeedka ugu weyn waa in nafo la taariikhda ciyaaraha ka, si looga hortago kulamada guridda in la illoobi doonin. Ujeedada Mame waa in ay tixraac u Howlaha hoose oo mashiinada Arcade kudayasho. Emulator ayaa hadda taageeraa in ka badan toddoba kun oo kulan gaar ah iyo toban kun image nooc ROM dhabta ah, in kastoo aanay wada daawan ciyaaraha oo ay taageerayaan yihiin playable. Bannaanka, emulator ah u consoles'ka ciyaarta video badan iyo nidaamyada computer.
Mame isku duwaha dega Khayaadka oo ka mid ah qaybaha kala duwan waqti. Element kasta yeeli karaa dhaqanka joogo hardware in mashiinada Arcade ah. Arimahan waxaa la virtualized si Mame u dhaqmo sida lakabka software dhexeeya barnaamijka asalka ah ee ciyaarta ah, iyo madal Mame waddaa on. Mame taageertaa qaraarada screen aan loo aabo yeelin, heerka helid iyo gaadmada ah soo bandhigay. Kooxda Qaramada midoobay kudayasho Multiple, sida looga baahan yahay tusaale ahaan Daariyus, waxaa taageera iyo weliba.
Taageerayaan Operating Systems Iyo Aragtida Wixii Mame Hannaanka
Emulators Mame ah loo horumariyo socda nidaamyada hawlgalka:
Top Toban Emulators In Market
AdvanceMAME waa derivation ah Mame, taas oo emulator ah kulan Arcade. Waxaa ka duwan Mame waa in aad ordi karaan on Linux iyo Mac OS X, iyo sidoo kale DOS iyo Microsoft Windows. Waxaa loo qorsheeyay in la kormeerayaasha mashiinada Arcade, telefishanka, iyo computer kormeerayaasha shaqeeyaan. Waxaa ruqsad ka heeysan GPL liisanka, marka laga reebo qaybaha in ay leeyihiin ay liisanka Mame u gaar ah. Mashaariicda Advance ayaa laguu ogolaado in aad u ciyaaro kulan Arcade la hardware video sida telefishin, kormeerayaasha Arcade, kormeerayaasha PC iyo screens LCD. Waxay u ordaan in GNU / Linux, Mac OS X, DOS iyo Windows.
Waafaqsan yahay qaab TV.
Arcade iyo kormeerayaasha inta jeer go'an
Hagaajinta taageero video.
Waxaa loo tixgeliyaa in ay emulator aad u deggan.
Ciyaaraa oo dhan ee ciyaarta in hab xasillan.
Emulator Fast la taageero hawlgalka badan.
Tani waa calaamad Mame cusub oo ka baxsan by-saarka by dEf. dEfMAME bixisaa uqaadineed qaar ka mid ah iyo sidoo kale 60Hz dubaridka u hagaagsan-saxda ah iyo darawallada jeeg dheeraad ah oo ku tiirsan ilaha DMAME (Mame u DOS). Waana in aan la ordi ka jawi kale DOS laakiin sida DOSBox). Waa tilaabo laakiin, oo sabab u ah darawallada sharci darrada ah ka kulan ee cusub sida birta dixiri jilicsan afar, Sumarai Shodown shan, Boqorka Xarakada 2002, iwm qeybta deegaanka karti, waa xad gudub ku ah liisanka Mame ah
Version Gaarka ah kaliya kulan NeoGeo. Darayaa 16-yara taageero midabka iyo khariidado keyboard dheeraad ah oo kulan ka adag. The version C badan oo deggan si kastaba ha ahaatee gaabis ah, halka version ASM waa deg deg ah si kastaba ha ahaatee yar la saadaalin karo. AMD iyo Pentium- compilations filaayo in sidoo kale waxaa la bixiyaa.
Tani waa edbinta iyo user interface version ah Windows. Mame in uu leeyahay taageerada luqadaha badan, kor u saamaynta video oo dheeraad ah. Mame Plus! mashruuceeda bilowdey yaabaa 2002 (version hore 0,60), markii hore in ay dhaqan taageero koodh caalamiga ah ee Mame. Currently Plus! ayaa fursado dhowr ah si ay u abuurto dhisayo wanaagsan aan rasmi ahayn.
5.MAME PLUS kala duwan JET:
Tani waa oame by-saarka Plus! in darawallada fursadaha bannaanka (oo ay ku jiraan kuwa u consoles'ka guriga sida SNES iyo N64), intaa ka badan oo ay taageerayaan nooc akhri kaliya xusuusta ka kooban jabsaday akhri kaliya memorys (kuwa jecel hacks ROM kulan ee ay Arcade jecel).
Copycat Tani waxaa laga yaabaa noqon version beddelitaanka MAME32 in uu ugu horeyn ku salaysan in Mame. Fikradda ah MAMEFANS32 waa in lagu kordhiyo fursadaha cusub oo aan arkay oo xiiso leh iyo MAME32 maqan iyo in ay oggolaadaan in taageero af-Multi ah inaad hantidaan ugu shugri weyn in dadka isticmaala aan Ingiriiska.
WPCmame waxaa dhisay darawal ah oo dheeraad ah si ay u MAME0.37 beta sideed sahayda. Dhammaan Mame "hawlaha" caadi ka shaqeeya wpcmame (shido profiler, debugger, khiyaameeya, record / loo maqli karo, amarka iwm) si kastaba ha ahaatee in maanka lagu hayo in ay ka taageerayaan unharness beta Mame ah. Kulankaan WPC emulator / Qabille oo ma aha 100 boqolkiiba playable. Waxa keliya emulates looxyada circuit elektaroonik ah iyo sidoo kale show gudahood mashiinka pinball ka dib sanduuqa. Ma jiro cidi oo ma kubadaha in aad kaliya eeg soo bandhigi doonaa. Si kastaba ha ahaatee, aad dhaqaajiso doonaa shido iyadoo aad keyboard, arki animations show, oo maqla / qoraan ciyaarta pinball dhawaaqo.
Smoothmame laga yaabaa in spinoff Mame win32 ah, oo waxaa la abuuray dadka isticmaala WHO u baahan tahay qaab swish silken in kulan in ay isticmaalaan heerka aan caadiga ahayn helid konton wareegga ama wax ka sareeya. Xun oo keliya, marka la isticmaalayo dhismaha this, ciyaaraha oo dhan in Mame ordi karaa si hufan lixdan wareega - oo keena in flicker yar dhowr iyaga ka mid ah.
Visual PinMAME waa mashruuc xaasidnimo shahaada in tiirsan file xaadirka ah ASCII PinMAME qoraalka. Waxaa abuuraa wax Windows COM ah in la xakameyn karaa iyadoo af scripting ah (sida Visual Basic) Rom Center DAT File.
Birta Mame laga yaabaa inuu kala duwanaansho ah Mame in uu leeyahay qaar ka mid ah kulan remixed la duubo codka guutada Birta halis ahee Darawalka ah. Sidaas darteed arrimo ku qiyaastaan ​​ayaa warbixin, baakad codka waa in la soo bixi web site qoraaga.
Top 10 3D Android Games Worth cayaartoy ah
> Resource > Emulator > Top 10 Mame Emulators - Play Mame Multiple Arcade Machine Games on your computer